Misaotra soa ho an'ny namana! | Martech Zone
Alatsinainy, Aogositra 4, 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ho anao izay nahatsikaritra fa nanjavona tamin'ny Internet aho tamin'ny faran'ny herinandro, miala tsiny aho fa tsy nandefa naoty na roa akory. Nanana krizy mianakavy kely izahay tao an-trano izay nisarika ny saiko sy ny heriko rehetra. Tsy maninona ny maha-zava-dehibe ny bilaogiko ary mitazona ny lazako an-tserasera, tsy misy zava-dehibe toy ny fianakaviana.
Misaotra betsaka an'ireo namako, an-tserasera na an-tserasera aho, nandritra ireo fotoan-tsarotra ireo. Betsaka ny mailaka nataoko tamin'ity faran'ny herinandro ity, nanontany fotsiny raha mety daholo. (Mbola tsy mety io, fa ho tonga eo.)
Raha miresaka namana, ity dia lahatsoratra iray izay nokasaiko hatao mandritra ny fotoana fohy. Sakaiza tsara sy namana Bean Fiend, Jason Bean (tsy misy fifandraisana) nanoratra lahatsoratra Be Douglas KarrNamana.
Nanomboka izany rehetra izany rehefa nanangana ny fakantsariny i Jason mba haka sary azy mirahalahy. Nanesoeso aho nijoro teo ary namihina azy ny tanako ary nalainy ny sary. Avy eo izahay dia nahita hevitra ny hanao lahatsoratra iray ary 'hameno ny hafa' ary ho namako. Ity ny valiny azonay!
Tsy dia mikapoka ny lohan'i John Uhri aho, hatosiko eo ambony latabatra izy ary azon'ny fakantsary izany!
Nihaona imbetsaka tamin'i Lorraine sy ny vadiny aho tamin'ny hetsika isam-paritra ary nahafinaritra anay ny niaraka tamin'ny orinasa iray (farafaharatsiny mba antenaiko fa nahafaly ahy ireo!). Heveriko fa toy ny fianakaviana tafaraka indray izahay!
Vaovao amiko ny bilaogin'i Michelle - saingy efa nankafiziko ny prosa manokana momba azy. Manantena aho fa afaka mihaona amin'i Michelle isika ka manana an'io kapoaka kafe io!
Podcaster eo an-toerana, ary mpandraharaha mozika extraordinaire, Darrin Snider na dia nanokana fotoana hanaovana ilay fihetsika aza! Nihaona tamin'i Darrin aho tamin'ny ExactTarget ary tena nahafaly ny resakay. Manantena ny hiampita lalana indray atsy ho atsy!
Mbola afaka miditra amin'ny fahafinaretana ianao! Ity ny sary tany am-boalohany fa afaka Photoshop ny tenanao! Arakaraka ny maha mpinamana anao no mahatsara azy!
Tags: famborahanaftcfamolavolana Sarytsy ara-dalànaara-dalànafihaonambe fivarotanatoro-hevitra slalomarehevitra
Starbucks: fiakaran'ny vidim-piainana sy fanombanana ny marika
Aug 4, 2008 amin'ny 9: 46 AM
4 Aogositra 2008 à 2:34